फरक – A mélange, as LIFE is
‘ कस्तो ढुंगा जस्तो मन ‘
– कसैले कसैलाई भनेथ्यो – ‘ कसै गरे पनि नपग्लने ‘
झल्याँस्स आज सम्झें –
मेरो मन पनि त आज सम्म पग्लिएको मलाई थाहा छैन !
कतै मेरो मन पनि ढुंगा जस्तै त छैन ?
धुइंपताल खोजें मनलाई
ढुंगा जस्तो मात्र होइन
ढुंगाकै पो रहेछ मेरो मन त !
चाहिएन मलाई नपग्लने ढुंगाको मन
र अहिले तुलना गर्दैछु
ढुंगाको मन लिएर बाँच्नु र मन नै नलिई बाँच्नुको फरक !!
Previous कक्षा दशको अटो! Password – schoolmemories
Next BBC Comment